Daawooyinka Iyo Corona • Dawooyinka Inc.eu
Toddobaadkii hore, daraasado dhowr ah ayaa muujiyay in tallaabooyinka ku saabsan corona sidoo kale saameyn ku yeeshaann isticmaalka khamriga iyo daroogada. In ka badan kalabar dadka cabba aalkolada waxay bilaabeen inay cabbaan khamri in yar had iyo jeer bilihii la soo dhaafay. Qaar badan oo dadkan ka mid ah ayaa iyaguna cabbay khamri yar mar.
Ilaa hadda inta ugu badan (79,7%) la sheegay sababta loo cabo in yar ama ka yar aalkolada ma awoodo in la baxo ama la arko asxaabta oo ka yar (73,6%). Sawirkaan waxaa xaqiijiyay warshada khamriga. Iibinta biirka maqaayadaha iyo dhacdooyinka dhacdooyinka ayaa ahaa in kabadan seddex meelood meel Agoosto 2020 (36,5%) hoos u dhacay marka la barbardhigo Agoosto 2019. Bishii Luulyo 2020 waxaa jiray hoos u dhigis u dhiganta oo ah 33,1 boqolkiiba. Bixiyeyaal badan, warshadaha cunnada iyo dhacdooyinka ayaa ah suuq iibin muhiim ah qeybahaasna waxaa si aad ah ugu dhacay tallaabooyinka ku saabsan corona.
Cilmi baarista Trimbos ayaa sidoo kale muujisay in kalabar dhammaan dadka isticmaala xashiishka ay joogeen bilihii la soo dhaafay xashiishad badanaa bilaabay isticmaalka. Dadka bilaabay isticmaalka xashiishadda badanaa, in kabadan kalabar ayaa waliba isticmaala xashiishad ka badan markiiba. Daawooyinka kale, isticmaalka maskaxda (sida LSD, 2C-B iyo truffles) ayaa batay bilihii la soo dhaafay iyo in adeegsiga kiciyaasha (sida XTC, cocaine iyo amphetamine) ay hoos u dhacday. Sida ay sheegeen cilmi baarayaashu, tani waxay la xiriirtaa macnaha guud ee daawooyinkaan loo isticmaalo. Daawooyinka leh astaamaha maskaxda ayaa si aad ah loogu isticmaalaa guriga, halka kiciyeyaasha loo isticmaalo badanaa hab nololeedka, sida naad ama xaflad. Dadka bilaabay isticmaalka maandooriyaha in yar ama ka yar bilihii la soo dhaafay, awoodin inay baxaan waa sababta ugu badan ee la sheego (45%)
Marka dadku waxay bilaabeen inay cabbaan waxyar ka yar iyo khamriga oo yaraada, maxaa yeelay waxaa jiray dhacdooyin kayar oo warshadaha cuntada ayaa qeyb ahaan xirnaa. Dadku sidoo kale waxay bilaabeen inay isticmaalaan kiciyayaal badanaa, badanaa sabab la mid ah. Taa bedelkeeda, dad aad u tiro badan ayaa bilaabay inay isticmaalaan walxaha dhimirka badanaa bilihii la soo dhaafay. Tani waxay muujineysaa in goobta (jawiga iyo bulshada) ee dadku ku sugan yihiin ay saameyn ku yeelaneyso ilaha ay (rabaan) inay ku isticmaalaan. The aragti ku saabsan dejinta iyo dejinta ma ahan wax cusub, laakiin bilihii la soo dhaafay waxaa la muujiyay in xulashada badeecooyinka qaarkood ay qeyb ahaan ku xiran tahay deegaanka lagu isticmaalo alaabooyinkaas.
Wasiirka Grapperhaus wuxuu ku socday wadadiisii ​​kadib markii loo maro waddo leex leexad ah. Xagaagii 2019 ayuu qabtay a codsi xafladaha yar dagaalka ay kula jirto dambiyada daroogada. Sannad kadib, dhammaan ciidaha waa la joojiyay sababo la xiriira tallaabooyinka ku xeeran corona naadiyada badankood waa la xiray dad badana waxay bilaabeen inay isticmaalaan kiciyeyaal yaryar, qayb ahaan tan awgeed. Waxaan rajeynayaa waa in tani ay ahaan doonto mid kumeelgaar ah iyo in isticmaalka daroogada uu mar kale kordho marka naadiyadu furmaan oo xilliyada ciidaha ay bilowdaan.
Taasi waa sababta hadda ay u noqon laheyd waqti fiican oo looga fikiro siyaasada daroogada Nederland. Miyaynu ku sii soconaa isla wadadaas mise waxaan aqoonsan nahay in dadka qaar ay si miyir leh u doortaan inay daroogo ku isticmaalaan goob gaar ah? Miyaynu hubinaynaa inay dadkani u isticmaali karaan daroogada sida ugu macquulsan mise waxaan sii wadeynaa cabsi, mamnuucid iyo ciqaab intaa ka sii daran?
Isla dariiqaas ayaa noqday inuusan la shaqeyn corona sidoo kale. Markii hore, dadka waxaa la siinayay ganaaxyo culus iyo rikoodh dembiyeed oo ah inayna u hoggaansamin tallaabooyinka, laakiin tani si tartiib tartiib ah ayey isu beddeshay, gaar ahaan ka dib markii guurka wasiir Grapperhaus, oo cadeeyay inuusan u hogaansami karin talaabooyinkiisa. Wuxuu ku galay dhibaato siyaasadeed arintan, waxay ahayd inuu bixiyo ganaax wuxuuna helay rikoodh danbi ah. Diiwaankaas dambiga ah hada waa la tirtiray golaha wasiirada, qeyb ahaan marka laga codsado Golaha Wakiilada, sababtoo ah dabcan uma muuqato mid soo jiidasho leh: Wasiirka Caddaaladda oo rikoodh dambiile ah.
Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa hadda aqoonsanaya, oo ay ka mid yihiin Diederik Gommers (NVIC), “in lagu beero cabsi iyo tallaabooyin adag oo cidhibtiisu ay galaan oo keliya ciida. Runtii ma aanan jeclayn waxaas oo dhan ganaaxyadaas culus ee loo haysto iyo haysashada rikoodh dembiyeed. Taasi ma ahan sida ay uga shaqeyn doonto Nederland. ”
Waxaan la yaabanahay waxa dhici lahaa haddii wasiir Grapperhaus la sawiri lahaa isagoo qaadanaya ur wanaagsan oo coke ah. Miyuu iska casili lahaa Wasiirka Cadaaladda iyo Amniga? Xaaladdaas oo kale weli lagu kalsoonaan karo loo tixgeliyaa inuu yahay xubin ka tirsan dowladda oo si wada jir ah mas'uul uga ah siyaasadda daroogada? Mise midbaa si cagajiid ah u qirayaa in habka hadda socda uusan shaqeyneyn?
Waxaa la joogaa waqtigii la heli lahaa siyaasad daroogo cusub oo khatar yar ku haysa caafimaadka bulshada, xakamaysa kharashaadka ku baxa fulinta daroogada isla markaana caddaalad ku samaynaysa xorriyadda doorashada ee dadka. Waxaa la joogaa waqtigii la kordhin lahaa cadaadiska saaran Hague siyaasadeed loona diro calaamado adag. Wadajir kaliya ayaynu ku xakamayn karnaa dawladda.
dukaanka kafeegataajFayras Coronago'aan qaadashodaroogadaKHLAsharciyeyntasharci-dejintalsdmdmaNederlandcilmi baarisboqoshaadamaskaxiyanmukhaadaraadka syntheticsharcigaxtc
Amsterdam waxay dooneysaa inay ka mamnuucdo booqdayaasha shisheeyaha inay soo iibsadaan xashiishadda
Duqa magaalada Amsterdam ayaa isku dayay inuu ku guuleysto taageerada siyaasadeed ee 'nadiifinta' dadka buux dhaafka ah…
Guusha taxanaha ah ee Neflix Undercover ayaa la timid filim
Taxanaha Nederlandka Dutch-ka ah ee 'Undercover' wuxuu si dhakhso leh u helayaa filim isdaba-joog ah oo diiradda saaraya dabeecadda Ferry Bouman. The…
Mr. Bean waxay la timaaddaa beebistaha jelly
Digirta Jelly; waad ogtahay iyaga. Nacnac midab leh dhadhanka oo dhan waad qiyaasi kartaa. Ugu yaraan ...
Tarek ayaa qoray:
9 November 2020 ee 03: 32
Dagaal ka dhan ah siyaasiyiinta munaafiqiinta ah ee munaafaqnimada ah ee muxaafidka ah!,